Horseed oo goolashii ugu badnaa sanadkan kaga adkaatay kooxda Badroolka FC. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Horseed oo goolashii ugu badnaa sanadkan kaga adkaatay kooxda Badroolka FC.
Posted by: radio himilo February 8, 2018
Horyaalka heerka koobaad ee Dalka ayaa si habsami leh kaga socda garoonka Banaadir Stadium ee dagmada Cabdi Caziiz, tan iyo markii uu bilaawday horyaalku kooxaha aan dhinacooda dhulka la dhigin waxaa qeyb ka ah naadiga Horeed.
Kooxda Horseed waxa ay hoggaanka u qabatay horyaalka Soomaali Premier League galabta markii ay goolashii ugu badnaa kaga adkaatay dhigeeda Badroolka oo dhawaan kasoo diga-rogatay magacii ay caanka ku aheyd ee Savana, Badroolka FC, labo kulan oo ay horay usoo ciyaartay lama aysan kulmin wax guul-darro ah hayeeshee saameynta uu ku yeeshay kulankii galabta waxa uu noqon doonaa mahadho ay sanadkan xasuustan.
Kaliya Saddex kulan ayaa laga soo dhaliyey min afar gool tan iyo markii uu bilaawday fasal ciyaareedkan, tii galabta waxa ay aheyd mid ka duwan iyo markii koobaad in Garoonka Banaadir Stadium uu marti-galiyo ciyaar la is kaaga badiyey Afar gool iyo wax kabadan xilli ciyaareedkan.
Kulankan dhex maray labada kooxood ee Horseed iyo Badroolka FC ayaa ku bilaawday duulaan ku wajahan goosha kooxda Badroolka FC, wiilasha macalin Cumar Caruus ayeyna ka go’neyd in ay qeybta horaba ciyaarta dilaan isla markaana ay shabaqa gaaraan. Horseed waxa ay ku hubeysneyd kuna faaneysay wajiyadeeda muhiimka ah ee Xasaasi, Ajiga Isa, Nuune Hashim, iyo Cali Cadde, macalin Cumar Caruus ayaa u muuqday mid ay ka go’an tahay helidda natiijada ciyaartan taas oo u fududeysay in ay shan mar shabaqa gaaraan 45-kii daqiiqo ee ugu horreysay kulanka.
Kooxda dhawaan kasoo dalacday horyaalka heerka hoose ee Badroolka FC, ayaa inteeda badan ku jirtay difaac iyo iska caabinta weerarda kaga imaanayey kooxda lagu naaneyso Cawo iyo Maalin, laakiin difaacaas ma-noqon mid sii waara, daqiiqaddii 2aad waxaa goolka koobaad u saxiixay Horseed xiddiga lagu magacaabo Direey, waxa yar kadib waxaa goolkiisii ugu horeeyey ee Horseed dhaliyey Xasan Cabdi Nuur Geesey Xasaasi, wuxuu ahaa ahaa goolkii labaad ee kulanka dhanka Horseed, kii Saddexaad iyo kii afaraad ee Horseed waxa mar kale sii raacsaday Xasan Cabdinuur Geesey Xasaasi, oo ciyaartan ka dhaliyey Saddexley, waxeyna sidaas ciyaartu ku noqotay 4-0.
Inta aan lakala marin qeybta hore ee ciyaarta isla markaana aan la’aadin qolka nasiinada, waxaa natiijada kulanka 5-0 u rogay xiddigga Frank Wananda, qeybtii hore ee kulanka ayaana sidaas kusoo dhamaatay. Markii dib la’is kuugu soo laabtay qeybta labaad ee dheesha, ciyaartoyda Badroolka FC ayaa lasoo laabtay iyaga oo ka tug-tug roon sidii ay ahaayeen qeybtii koobaad ee kulanka, waxeyna dadaalkooda ku heleen goolka calanka, kubbad isku laalabatay markii horana ka timid Maxamuud Cabdi Xasan, ayaa gashay Shabaqa uu waardiyaha ka ahaa gool-haye Akram.
Badroolka FC waxaa ay sidaa oo kale heshay gool-kulaad lagu abaal mariyey, hayeeshee kubaddii ganaaxa aheyd ee lagu abaal mariyey waxaa dayacay oo gool u badali waayey kabtan Maxamed Cumar.
Ugu danbeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 5-1 oo ay ku adkaatay kooxda Horeed.
Previous: Kooxda Banaadir SC oo guul weyn ka gaartay naadiga Waxool
Next: Kooxaha Heegan iyo Madbacada oo bar baro ku kala baxay.